Abapheki Futhi Shona Cooks Job Description / Ukuziphendulela Isifanekiso Futhi Izindima – JobDescriptionSample.org
Animal Control Abasebenzi Job Description / Isibopho Isifanekiso Futhi Imisebenzi
Ikhaya / Ukukhangisa / Abapheki Futhi Shona Cooks Job Description / Ukuziphendulela Isifanekiso Futhi Izindima
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa Shiya amazwana 3,642 Ukubukwa
Direct futhi ayikwazanga iqhaza ekulungisweni, amakhambi, futhi uzilungiselele Muffin izinhlanzi, inyama, imifino, salads, noma ukudla eyengeziwe. Kwangathi ukulungiselela kanye Ukukhetha izindleko izinto, bathenge imikhiqizo, futhi silondoloze idatha nama-akhawunti.
Jobe Amakhono Udinga
Hlola imikhiqizo ukudla olungiselelwe noma engaphekiwe’ banga ukuze siqiniseke ukuthi zindlela siyithola.
Gada ukuthuthwa kwendle onkhe ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi ukulandela okulindele nemithetho.
Qinisekisa izinga lokunyathelisa nenani kwezimpahla etholwe.
Ukucelwa noma ukuthenga ukudla noma izinto ezahlukene kwakudingeka sina ukuze siqinisekise inqubo ukuthi lokho kusisize kakhulu.
Gada noma ahlele nendima yabo entsha yokuba abasebenzi noma abapheki ezisebenza ekulungiseleleni ukudla.
Sebenza izifunda ukwenza ezithile, amadivayisi, noma nokuhlola izimpahla conformance nezimfuno neshaya.
Nquma ukuthi ukudla kufanele kwetfulwe futhi ukhiqize izici zokudla zokuhlobisa.
Bonisa abapheki noma abasebenzi ukuthi kukhona ezengeziwe ukulungiselela, ukupheka noma ukubonakaliswa nokudla.
Bala amanani kanye nezindleko ebalulekile ihlinzeka, ezifana isibonelo ukudla izakhi.
Hlanganyela abasebenzi ukuthi zihlukile ecabangela izici eziningana ezinjengolwazi ngisho inani cishe abathengi noma izinkathi ukukhetha izingxenye ukuhlela ukuthola zokupheka noma okukhethiwe.
Hlola izitsha ukuphathisa amanani amamenyu izinto, predicated ku ukudla, umsebenzi, futhi ngezindleko nezindleko.
Lungiselela futhi wenze ukudla kwazo zonke izinhlobo, mhlawumbe phezu isisekelo njalo noma mayelana izivakashi okukhethekile noma izici.
Nquma okukhipha ajenda abasebenzi Ukucaciswa edingekayo ukuqinisekisa bakuthola njalo amasevisi.
Thola futhi ukuqasha abasebenzi, ezifana abapheki nezinye abasebenzi ikhaya.
Hlangana namakhasimende ukuya phezu amamenyu izimo ethile, ezifana ngokwesibonelo imishado, amaqembu, noma amadili.
Bonisa imikhuba emisha ukupheka noma imikhiqizo nobhoko.
Khuluma engenayo rep ukuxoxa izindleko noma ukuthenga izinto.
Cela kwamaphutha noma igiya uthenga.
Umbiko indalo noma ukwaziswa okuningiliziwe izinhlobo ukuthi zinikwa.
Lungiselela, eyinhloko, noma beqondisa PrEP nokudla noma imisebenzi yokupheka of emakhishini eziningana noma eateries e esiyi ezifana ngokwesibonelo neketanga Diner, esibhedlela, noma motel.
Ukuqondanisa ukuhlela noma ekutholeni zonke izinqubo ukudla ngaphakathi amabhizinisi kuhlanganise amakilabhu, amamotheli, noma cafe ngamaketanga.
Umsebenzi Izenzo Ukufaneleka
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Ekwazini wadala okuqukethwe futhi imigqa e amafayela ezihlobene nomsebenzi.
Ukulalela-Ukuze Active yiziphi ezinye-abantu bathini Ngokunaka ngokugcwele, ukuthola isikhathi ukuqaphela amaphuzu kokuba ekhiqizwa, obuza imibuzo njengoba elungile, kunokuba likhinyabeze at izikhathi okungalungile.
Publishing-yokuxhumana kahle olotshelwe hhayi njengokungabafanele nezidingo ezibukelini.
Ukukhuluma-Ukukhuluma nabanye ukuze adlulisele amaqiniso kwamandla.
Maths-Ukusebenzisa maths ukulungisa izinkinga.
izindlela Technology-Ukusebenzisa nemihlahlandlela zesayensi kungaxazulula izinkinga.
Ukucabanga ukuthi ukucabanga ezibucayi-Isebenzisa nezizathu ukuqaphela nemibi kanye namakhono izindlela, Imiphumela noma izimpendulo esikhundleni ukuze izinkinga.
izinzuzo Active Imininingwane Learning-Ukuqonda fresh ngokuphathelene kokubili problemsolving oluzayo futhi zamanje kanye izinqumo.
Ukufunda Izindlela-ukukha nokusebenzisa amasu coachingPEReducational futhi inqubo efanele isimo othize ukufundisa noma lapho usukwazi ukudlala kahle yizinto ezingabalulekile fresh.
Monitoring-OverseeingOREvaluating ukusebenza ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo, abantu ukuthi zihlukile, noma izinkampane lithathe izinyathelo zokulungisa noma ukukhiqiza izithuthukisi.
Komphakathi Perceptiveness-Ukuqaphela othersA izimpendulo ngenkathi benza kungani zisabela nokwazi.
izenzo Coordination-Ukuguqula maqondana nemisebenzi othersI.
Azithenge-Ngempumelelo abanye ukushintsha izingqondo noma izenzo zabo.
Izingxoxo-Ethula abanye ngokuhlanganyela nokuzama buyisana okwahlukile.
Ukufundisa-ibayala abanye nje indlela sithuthe.
Inkampani Orientation-Nakanjani efuna amasu ziyolekelela abantu.
Advanced Problemsolving Ukuthola nobunzima esiyinkimbinkimbi imininingwane efanele uhlole futhi ukuthuthukisa amathuba kanye nokuqalisa izixazululo.
Amabhizinisi Ukuhlolwa-Ukuhlola izidingo kanye lento Ukucaciswa ukwenza isendlalelo.
Ubuchwepheshe Design-Technology ukukhonza umthengi futhi bakubheka amathuluzi noma ukukhipha izifiso.
Gear Ukukhethwa-Ukunquma uhlobo amathuluzi kanye nemishini waba isidingo ukwenza umsebenzi.
Ukufaka-Ukufaka imishini, imishini, izintambo, noma izinhlelo ukuhlangabezana Ukucaciswa.
UHlelo-Ukubhala ikhompyutha amaphakheji ngokuqondene nezinjongo eziningana.
Operations izingcingo Monitoring zokubuka, Izikali, noma nezinye izimpawu uqiniseke kukhona imishini enza ngokufanele.
Ukusebenza nesibambo-Ukulawula imisebenzi amadivayisi noma imishini.
Isisetshenziswa Isondlo-Kwenziwa yokondla okungukuthi isimiso kugiye kokunquma uma.
Ukuxazulula Ukuthola izizathu yokusebenza glitches kanye nokukhetha uqhubeka kanjani ngalokhu.
Ukubeka-Ukubeka izinhlelo noma amadivayisi sisebenzisa izindlela ezidingekayo.
Quality Control Ukuhlolwa-Ukuphelelisa izivivinyo kanye amasheke lwezinto, amasevisi, noma imisebenzi ukulinganisa kahle noma izinga.
Ukuhlakanipha Isinqumo Ukwenza-Uma ucabangela izinzuzo amanani ngokuqhathanisa izinyathelo ukuthi kukhona kungenzeka ukukhetha omunye kangcono.
Systems Ukuhlaziya-Ukunquma indlela izinguquko emkhathini, imisebenzi, futhi izimo kungase kuwuthinte imiphumela futhi hlobo luni amasu kufanele enze.
Systems Ukuhlolwa Ukuthola izinyathelo noma izimpawu ukusebenza kanye isihlobo ukuba izifiso of ilungelo uhlelo noma imisebenzi edingekayo ukuthuthukisa ukuphumelela.
Timemanagement-nokusingatha kwesikhathi siqu kanye nabanye’ inkathi omunye.
Ukuphathwa Savings-Icacisa indlela imali iyokwenziwa wachitha sokuthola umsebenzi igcwaliswe, futhi ukugcinwa mayelana lezi zindleko.
Ukusebenza kwezinhlaka Mkhiqizo Kusho-Discovering nokuthola ekusetshenzisweni efanele insiza igiya, kanye nemikhiqizo imithombo waba isidingo ukwenza umsebenzi eshiwo.
Ukugada Abasebenzi Resources-Ugqozi, isakhiwo, futhi wangitshengisa abantu njengoba babesebenza, ekuboneni abantu phezulu lomsebenzi wakho.
Imfuneko Ezemfundo Ulwazi Ukufaneleka
Inani Nxusa sika (noma ezengeziwe-yr TWO lemali)
Senior High School Degree (noma kukaGedaliya noma Senior High School kwefrakshini Certificate)
Ngaphezu kwe 4 iminyaka, okuningi njengoba iminyaka SESITHUPHA futhi kubandakanya,
Umsebenti Authority Amakhono Ukufaneleka
Ukukhuthazela – %
Inkinga ukuthola Abanye – %
Ukuzithiba – %
ingcindezi Tolerance – %
nokwethembeka – %
Ukuqaphela Ukujula – %
Amandla – %
Ukuzibusa – %
Analytical Ukucabanga – %